Ngamnye wethu uphantsi kohlobo lwe-3,000 ukuya kwi-10,000 yokuchazwa kweempawu yonke imihla ngeentengiso zeTV, iibhodi zebhodi yangaphandle, iibhena zewebhusayithi, kunye nezikipa zabamelwane okanye iikomityi zekofu. Kuba sizaliswe ziintengiso, abathengisi bazobe uphando lwamva nje lwengqondo kwaye basebenzise iindlela ezahlukeneyo zokubamba umdla wethu kunye nokufumana ukuzithemba kubathengi.
Ngaba ucinga ukuba ubuqhophololo obu? Okanye ngaba idlala nje kwinto esiyifunayo sonke? Sifuna ukuyila ngakumbi… ukuba ukuthenga iApple kusinceda sikholelwe ukuba sinjalo, ingaba kubi kakhulu? Kwaye, ngesimbo esiphakamileyo sika-Apple sehardware yabo - ngaba ngekhe bathenge iApple ngakumbi, nangayiphi na indlela? Ke… xa ujonga emva… ingaba abasebenzisi beApple bayile ngakumbi? Ndicinga ukuba banokuba njalo!